Hubka culus oo la maqlay Tukaraq iyo Xiisad cusub oo ka taagan Maanta | Kalshaale
Hubka culus oo la maqlay Tukaraq iyo Xiisad cusub oo ka taagan Maanta
May 16, 2018 - 11 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Wararka haanta Naga soo gaadhaya goobaha ay Ciidamada Puntland iyo Kuwa Somaliland ku sugan yihiin ee Gobolka Sool ayaa sheegay in xaalada deegaankaasi ay Saaka kacsan tahay, Iyadoo dagaalkii shalay uu ka dhashay Khasaare kala duwan.
Hub Culus oo ay isku adeegsanayaan Ciidamada Puntland iyo Kuwa Somaliland ayaa laga maqlayaa Aaga Tukaraq.
Isku socodkii gaadiidka ee magaalooyinka Laascaanood iyo Garoowe ayaa istaagay, mana jirto cid isku gudbaysa, Mana jirto cid Xaqiijin karta Khasaaraha dhabta ee kala gaadhay Labada dhinac.
Waxaan dhagaystay shalay muuse biixi oo hadlaya oo kala garan waayey inuu la dagaalamayo puntland iyo federal iyo daarood.
Mar federaalkuu eedeeyey.
Marna daarood buu isku qaaday asagoo magaacay afwayne iyo gaani iyo moorgan.
War odaygu doqonsaa oo hadduu daarood la dagaalayo dhulka uu ku dhimanayo saw daarood ma leh oo waxa u dagaalamaya saw dhulbahante iyo warsangali maaha mase ayaga daarood uma yaqaan.
Waxaan leeyahay muusoow dagaalka ha qabyaaladayn haddaad qabyaaladaysid aday kuu daran tahay oo daarood badan oo kula socdaad waayin.
Ilaahay dadka walaalaha ah ha kala qaboojiyo xaqana ha waafajiyo
Sowdinkii lahaa tukoraq waan qabsanay kkkkkkkkk kk Wali ma afartii wiil ee kastamka joogay ayaad la ildaran tihiin kkkkkkkkkkkkk kk reerku fulaysanaa waxaasaa 6 bilood isasoo abaabulayay
Qasaraha anagaa kushegayna ciidan beleedkii lasoo ururiyay tukoraq waa ku ilkabeeleen
Haddaad dagaal taqaan haddaa lama hadlo ciyaartu waa bilow
Faa’iidada Federaalka ayey ka midtahey in Jufo kasto Maleeshiyo beeled sameysto, Itoobiyana soo dhiibto rasaasta iyo Raashinka, Soomaaliduna dhiibto Dhimashada iyo Dhaawaca.
-Meles Axmaar ayaa ku dhahey C/llaahi Mahbar ha ii kala saarin aniga Maryo-Calas Harti iyo Hawiye qofkii Soomaali ka dhinto waa dhib iga harey ee isku dar DIBIDA DHINTEY.
—Hadda sidaan maqalney Dagaalkaan HUNGURIGA waxaa loogu magacdarey ( Dagaalkii HUWANTA DAAROOD iyo HUWANTA DIR) waxaana ku jirnaa Qarnigii ilbaxa.
Waxaa la isku heystaa meel kayar Kontoroolkii CEELASHA BIYAHA.
Ramadaan wanaagsan dhamaan . Dagaalkan isagu waxuu la mid yahay cunug dhashay oon dib ugu noqoneynin caloosha hooyadii! Waayo boolaxooftadiisa ayaan ku dhega-barjowney , waxaana ka qaybqaadanayo reer aakhiraad! Hadduu Eebbe weyne na siiyo cimri dheer waa inoo ciidda insha allaah.
” SAAMAXNAAKUM “
Muse Biixi,oo ku fashikmay isku hayntii Beesha Isaaq ee maamulka fucking Street, dagaalka Ceel afwayn ee uu isagu wado ayuu waayay wax uu dadka u sheego,kadib markii 6 jeer oo la dhaartay iyo heshiis ay jabiyeen Beesha Habar Jeclo,misana aanu jirin qof laga soo qabtay dadkaa jabinaya heshiisyada.Arintan ayaa aad laykugu waydiiyay meelaha ay ku kulmaan dadka Somaliyeed oo waxaa soo baxayday inuu maamulka fackingstreet dabada ka wado dagaalka Ceel afwayn.Muuse oo ay talo ku cadaatay ayuu dagaal ka bilaabay Tukaraq si dadka u galiyo dareenka kale oo lagu sii wada joogo.
Tani waa xalka kaliya ee uu ku sii jiri karo maamulka fuckingstreet.Wax kale oo lagu sii negaado lama garanayo.
Ha iloobin in daarood labada dhan ba xabbadda ka ridayo. Dhulbahante la’aanti dirta aad shheegayso oog iyo caynaba masoo dhaafeen. Kani waa dagaal siyaasadeed sidii muuse ha u hadlin.
KII KU DHINTA DAGAALADAAS WAA EHLU NAAR.
NEBI MAXAMED SCW BAA NOO SII SHEEGAY